Fidirana amin'ny fampahalalana fikarohana any Afrika - AfricaArXiv
navoakan'ny Joy Owango on July 10 July 10
Tao anatin'ny siansa nomerika andiany blog momba ny fikarohana mifandraika amin'ny SDG dia nanoratra momba ny SDG 4, fanabeazana kalitao ny mpikambana mpanolotsaina mpanolotsaina, Joy Owango.
Vakio ny lahatsoratra tany am-boalohany digital-science.com/blog/perspectives/sdg-series-accessing-research_info-in-africa/
Joy Owango, talen'ny at TCC Africa
Taona vitsy lasa izay, rehefa niasa ny mari-pahaizana diplaoma tao amin'ny Mass Communication aho, dia tadidiko mazava tsara fa sahirana amin'ny fidirana antontan-taratasy mifandraika amin'ny asako. Kivy be aho fa ny hany toerana ahafahako miditra amin'ireto taratasy ireto dia amin'ny alàlan'ny tranomboky ivontoerana fikarohana iraisam-pirenena any Nairobi. Hipetraka eo ivelan'ny trano famakiam-boky aho rehefa avy nanidy izy io, vao nandefa ny e-loharanon-tanana tamin'ny fampiasana ny WiFi. Tamin'izany fotoana izany dia nihevitra aho fa izany no fanao - ampahany amin'ny tolona amin'ny fanaovana diplaoma amin'ny diplaoma. Tsy folo taona lasa izay no nahitako ny hetsika Open Access. Endrey ny maso! Iray amin'ireny "ahoana no tsy nahalalako an'izany?" fotoana.
Ny iray amin'ireo mahasosotra indrindra (ary andao atrehana, manelingelina ny sisintaniny!) Amin'ny fikarohana dia ny fahazoana literatiora akademika mifandraika, fa tsy hahita hoe tsy azo. Tsy olana vaovao izany. Ny Paywalls dia be fahita amin'ny fanontana akademika. Raha mijery any Afrika, ny oniversite antonony dia tsy afaka miditra amin'ny fidiram-bolan'ny e-loharanom-baovao amin'ny fametrahana fikarohana ary voafetra ho angon-drakitra nomen'ny mpamoaka boky sy mpiara-miasa mpikaroka. Mampalahelo fa tsy misy farany ny sasany amin'ireo fampahalalana ireo, koa mbola misy fetra fanampiny amin'ny fahazoana fahalalana ny fironana farany amin'ny fikarohana.
Fandresena ireo fanamby amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa
Na eo aza ireo fanamby ireo, nivondrona ny ankamaroan'ny firenena Sub-Sahara hamorona consortium famakiam-boky izay manohana ny vondrom-piarahamonina sy ny fikarohana isan-karazany ao aminy. Mifampiresaka amin'ireo mpamoaka boky sy mpiara-miasa amin'ny fikarohana izy ireo amin'ny fahazoana loharanon-kevitra amin'ny fikarohana. Saingy, na eo aza ny fisian'ireo consortia famakiam-boky ireo, ary ankoatry ny South Africa National Library and Information Consortia, ny ankamaroany dia mbola miady mafy amin'ny fidirana amin'ny mahasoa, saingy lafo kosa ny angona ho an'ny fikarohana fikarohana. Tsy vitan'ny tsy mahagaga ny Afrika atsimo satria, araka ny filazan'ny Ivontoerana ho an'ny statistika UNESCO 2018 dia nandany 6.16% tamin'ny harin-karena isany tamin'ny fampianarana - vola be tokoa raha oharina amin'ny ankamaroan'ny firenena afrikanina hafa.
Raha oharina dia ny fifanarahana famakiam-boky any Eropa dia afaka manatanteraka fifanarahana Open Access manova endrika, toy ny Projekt DEAL any Alemaina, izay namorona fiaraha-miasa amin'i Springer Nature izay nahatonga ny fidirana lahatsoratra handoa sy ny famoahana Open Access ho an'ny mpikaroka alemà amin'ny aloa iray. Araka ny fifanarahana, ireo mpikaroka ao amin'ny andrim-panjakana Projekt DEAL dia afaka mamoaka boky manodidina ny 1,900 manodidina ny $ 2,750 (na manodidina ny $ 3,000) isaky ny taratasy. Maimaim-poana io saram-bidy io ary azo antoka fa tsy mahomby amin'ny consortia fitahirizam-boky afrikanina.
Fanabeazana kalitao sy SDG 4
Ahoana no ahafahan'ny tanjona fampandrosoana maharitra fahefatry ny Firenena Mikambana manodidina ny fanabeazana momba ny kalitao manampy amin'ny fananganana ny fiovana tsara amin'ity sehatra ity? SDG4 dia misy target manaraka ireto:
Amin'ny taona 2030, ataovy azo antoka fa hahatratra ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ny tanora rehetra sy ny ampahany betsaka amin'ny olon-dehibe.
Amin'ny taona 2030, alao antoka fa ny mpianatra rehetra dia mahazo fahalalana sy fahaizana ilaina hampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra, ao anatin'izany, amin'ny alàlan'ny fampianarana ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiainana maharitra, ny zon'olombelona, ​​ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny fampiroboroboana ny kolontsaina milamina ary tsy famoretana, manerantany zom-pirenena ary mankasitraka ny fahamaroan'ny kolontsaina ary ny fandraisan'ny kolontsaina amin'ny fampandrosoana maharitra
Araka ny Fikarohana momba ny toekarena afrikanina ny taona 2020 nataon'ny Banky fampandrosoana Afrikanina, latsaky ny 10% -n'ny mponina 25 taona no ho miakatra no manana fampianarana eny amin'ny oniversite manerana ny firenena Afrikanina.
Somary andrasana kely izany. Tsy mora ny programa pasiteran'ny diplaoma, mitentina $ 4,000 ka $ 18,000, arakaraka ny làlana sy ny anjerimanontolo. Ny ankamaroan'ny mpianatra amin'ny diplaoma no manohana tena ary mirary miasa miaraka amin'ny fianarany. Ny fandefasana fidirana amina boky amam-bola trosa dia tsy azo tanterahina ary mety ho antony atahoran'ny mpianatra maro, satria ny fidirana voafetra amin'ireo hery mpikaroka no mametra ny fampahalalana misy fa tsy izay tena ilaina.
Ireo mpianatra pasitera diplaoma dia tadiavina fa be vintana kokoa, satria ny ankamaroan'ny mpamatsy vola dia afaka mandoa fidirana amin'ireo loharano takiana hitarika fikarohana, ary ho an'ny valin'ny fanodinana mpanoratra izay namoaka ny fikarohana nataony. Ny vokatra dia dichotomy ny mpikaroka eo anelanelan'ireo izay nahazo diplaoma diplaoma sy ireo tsy eo. Ny Open Access dia mety hampihena io tsy fitoviana io, hiantohana ny fahazoan'ny mpianatra ny fahalalana tsara indrindra ary tsy voafetra amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo diary manam-pahaizana ny fidirana an-tsekoly izay azony atao, na inona na inona tohan'izy ireo ara-bola na tsia.
Fampihenana ny tsy fahazoana fepetra amin'ny fidirana fampahalalana momba ny fikarohana
Ny fampahalalana fikarohana an'ny Open Access dia afaka manala ny fampianarana ambony amin'ny alàlan'ny fanomezana loharano mitovy amin'ny mpianatra sy mpikaroka. Ny ekolojika akademika sy fikarohana ara-tsarimihetsika mahazatra dia misy ny fanohanana fotodrafitrasa sy ny maha-olombelona. Ny lakaoly mihazona izany miaraka dia data. Manokana indrindra ny angon-drakitra Open Access dia manentana ny fampitomboana ny kalitaon'ny famokarana fikarohana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanazavana fanampiny amin'ny fikarohana efa misy. Ny mpikaroka dia ahafahana misoroka ny fanamafisana ny asa. Izy ireo dia afaka mampitombo ny fahitana sy ny fiantraikany amin'ny vatsim-pianarana amin'ny alàlan'ny citation. Ny fikarohana azy ireo dia zaraina mora. Ny zava-dehibe indrindra, raha ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny Open Access, mora kokoa ny fitrandrahana lahatsoratra.
Insentifika ho an'ny fandrosoana
Tamin'ny taona 2007 dia nandidy ny Vondrona Afrikanina fa ny firenena Afrikanina dia tokony handany farafahakeliny 1% amin'ny fanjarian'izy ireo amin'ny fikarohana sy fampandrosoana (R&D). Ity dia ampahany amin'ny Paikady momba ny siansa, teknolojia sy fanavaozana ho an'i Afrika (STISA-2024) fanombohana izay miresaka ny ho avin'i Afrika hampiroborobo sy hamaly ireo fotoana hahazoany famatsiam-bola amin'ny siansa, teknolojia ary fanavaozana (STI) manerana ny kaontinanta. Amin'ny faran'ny andro dia ny loharanom-bola (ara-bola, tsara fanahy ary olombelona) no hamaritra ny fahombiazan'ny STISA-2024, ary ny STI sy ny fampandrosoana indostrialy ao amin'ny kaontinanta. Na dia fantatra aza ny hasarobidin'ny fanohanana iraisam-pirenena sy ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany, ny haavon'ny vola sy ny vola afrikana manohana ny loharano ara-bola dia hamaritra ny haavon'ny fananana afrikana ny fampandrosoana STI ary, vokatr'izany, ny torolàlana ho an'ny fivoarana sosialy-toekarena sy ny tontolo iainana amin'ny kaontinanta. (Tatitra STISA 2019).
Io didy io dia nahatonga ny firenena afrikanina 15 nanolo-tena handany 1% ny fisondrotany amin'ny R&D. Ireo firenena ireo dia ao anatin'ny Fanabeazana ho an'ny filankevitra momba ny siansa izay tanjona mitovy dia ny hampiroborobo ny siansa misokatra sy ny angon-drakitra ao amin'ny firenenan'izy ireo. Ny fikambanan'ireo oniversite afrikanina afrikanina, ny vatana elo ho an'ny andrim-pampianarana afrikanina rehetra, dia nanolo-tena ny hampiroborobo ny siansa misokatra sy angon-drakitra ho fomba hampitomboana ny famokarana fikarohana Afrikana ary hanatsara ny fahitana azy.
Tamin'ny volana septambra 2019 dia nanangana a politikam-pirenena Open Access ho an'ny andrim-pampianarana ambony. Ho fanampin'ny fahazoan-dàlana Open Access amin'ny boky sy angon-drakitra, ny politika vaovao dia nandrisika ny fampiharana ara-tsiansa misokatra amin'ny alàlan'ny 'openness' ho iray amin'ny fitsipi-pitondrana sy fanombanana ny tolo-kevitry ny fikarohana. Izany no mahatonga ny firenena afrikanina voalohany hanana politikam-pifandraisana misokatra, izay manome alàlana ny Open Access ho an'ireo lahatsoratra navoaka, tesis, disertations ary angon-drakitra vokatry ny fikarohana natao ampahibemaso nataon'ny mpiasa sy ny mpianatra tany amin'ny oniversite izay tantanan'ny Ministeran'ny Siansa ary Fampianarana ambony - amin'ny oniversite 47 mahery manerana an'i Etiopia.
Mampiroborobo ny famoahana akademika Open Access amin'ny alàlan'ny Akademia Afrikana momba ny Siansa (AAS) i Afrika, izay manana rindrambaiko Open Open fiaraha-miasa amin'ny Faculty of 1000 (F1000). Ireo fandaminana toy ny Research4Life (izay tohanan'ny Digital Science amin'ny alàlan'ny fidirana aminy Dimensions) manome ihany koa ny fidirana amin'ny fampahalalana fikarohana, fa ny TCC Africa dia manohy manohana ireo mpikaroka amin'ny alàlan'ny fananganana ny fahatokisanany sy ny fahalalany amin'ny fidirana ireo fampahalalana fikarohana. Manome sehatra ho an'ny famoahana haingana sy famerenana fandinihana olona ho an'ny mpikaroka izay tohanan'ny AAS ary programa tohanan'ny alàlan'ny tahirim-bolany, ny Alliance for Accelerating Excellence in Science any Africa. Manana afera Open preprint antsoina koa i Afrika AfricaArxiv, izay manaiky fandefasana akademika avy amin'ireo mpikaroka afrikanina sy izay manao fikarohana any Afrika.
Ireo fivoarana amin'ny siansa misokatra dia manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy any Afrika, ary ny tena zava-dehibe dia manome ny mpikaroka afrikanina ny fizakan-tena amin'ny fitadiavany. Amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ireo tanjona SDG dia antenaina fa ny mpikaroka afrikanina, ary raha ny vondron'ny mpikaroka manerantany, dia hahazo tombony amin'ny fidirana mombamomba ny fikarohana, ary noho izany fikarohana tsara kokoa.
Tags: Joy OwangoTanjona amin'ny fampandrosoana maharitra